တွင် စစ်တွေ, ရခိုင်ပြည်နယ် ရောင်းရန်အတွက် အိမ်ခြံမြေများ -19 စာရင်းများ | FazWaz.com.mm
တွင် စစ်တွေ, ရခိုင်ပြည်နယ် ရောင်းရန်အတွက် အိမ်ခြံမြေများ
FazWaz.com.mm ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သော 19 အိမ်ခြံမြေများ
Virtual 3D tours of စစ်တွေ အိမ်ခြံမြေများ for sale
Turn on this filter to only view အိမ်ခြံမြေများ for sale with 3D virtual tours!
3 Bedroom Condo for sale in Dagon, Rakhine
Myebon, စစ်တွေ, ရခိုင်ပြည်နယ်, မြန်မာ
900 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
3 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for sale at3Bedroom Condo for sale in Dagon, Rakhine
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,400 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Myebon, ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်3Bedroom Condo for sale in Dagon,...
321,400 စတုရန်းပေ
1,650 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 2,100 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Myebon, ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်3Bedroom Condo for sale in Dagon, Rak...
3 1 2,100 စတုရန်းပေ
2 Bedroom Condo for sale in Dagon, Rakhine
1,200 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
2 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for sale at2Bedroom Condo for sale in Dagon, Rakhine
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 960 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Myebon, ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်2Bedroom Condo for sale in Dagon, Rakhi...
2 1 960 စတုရန်းပေ
1 Bedroom Condo for sale in Dagon, Rakhine
1,500 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
1 အိပ်ခန်း ကွန်ဒို for sale at 1 Bedroom Condo for sale in Dagon, Rakhine
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 1,250 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Myebon, ရခိုင်ပြည်နယ် တွင် 1 Bedroom Condo for sale in Dagon, Rakhine...
Don't miss out! Get notified when new အိမ်ခြံမြေများ for sale are listed တွင် စစ်တွေ, ရခိုင်ပြည်နယ်
1,300 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 750 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Myebon, ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်2Bedroom Condo for sale in Dagon, R...
22750 စတုရန်းပေ
2,200 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,500 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Myebon, ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်3Bedroom Condo for sale in Dagon,...
2,300 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
4,500 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,500 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Myebon, ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်3Bedroom Condo for sale in Dagon,...
332,500 စတုရန်းပေ
We offer the best prices and price match on all အိမ်ခြံမြေများ for sale တွင် စစ်တွေ
2,200 သိန်း (2 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 900 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Myebon, ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်2Bedroom Condo for sale in Dagon, Rakhi...
2 1 900 စတုရန်းပေ
6,500 သိန်း (2 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်4ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 3,000 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Myebon, ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်3Bedroom Condo for sale in Dagon,...
343,000 စတုရန်းပေ
4,300 သိန်း (2 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,900 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Myebon, ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်3Bedroom Condo for sale in Dagon,...
331,900 စတုရန်းပေ
3,450 သိန်း (2 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,500 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Myebon, ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်3Bedroom Condo for sale in Dagon,...
6,000 သိန်း (2 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 2,160 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Myebon, ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်2Bedroom Condo for sale in Dagon, Rak...
2 1 2,160 စတုရန်းပေ
3,500 သိန်း (2 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,206 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Myebon, ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်2Bedroom Condo for sale in Dagon,...
221,206 စတုရန်းပေ
3,000 သိန်း (2 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,200 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Myebon, ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်3Bedroom Condo for sale in Dagon,...
321,200 စတုရန်းပေ
2,320 သိန်း (3 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 731 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Myebon, ရခိုင်ပြည်နယ် တွင် 1 Bedroom Condo for sale in Dagon, Rakhi...
12731 စတုရန်းပေ
6,500 သိန်း (4 သိန်း/စတုရန်းပေ)
11,000 သိန်း (5 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 2,108 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Myebon, ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်2Bedroom Condo for sale in Dagon, Rak...
2 1 2,108 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,000 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် Myebon, ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်3Bedroom Condo for sale in Dagon,...
332,000 စတုရန်းပေ
1 - 19 ၏ 19 အဖြေများ
စစ်တွေ ၏ အိမ်နီးချင်းများကို ဖော်ထုတ်ပါ
သင့်အတွက် 19 အိမ်ခြံမြေများ
ဝယ်ပါ : 896 သိန်း - 11K သိန်း
စစ်တွေ အိမ်ခြံမြေ ပုံစံများ
ဦးတည်ရာများနှင့် ပျမ်းမျှများကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် စစ်တွေ အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်ကို လေ့လာပါ။
စစ်တွေ တွင် နေထိုင်ခြင်းအတွက် အားထုတ်နိုင်စွမ်း
အလယ်အလတ်ရောင်းဈေးသည် စစ်တွေ တွင် ခန့်မှန်းချေ 2,990 သိန်း ဖြစ်သည်။ စစ်တွေ ရှိ ၁စတုရန်းပေ အတွက် အလယ်အလတ်ဈေးနှုန်းမှာ2သိန်းဖြ စ်သည်။ စစ်တွေ တွင် ရောင်းရန်အတွက် 19 အိမ်ခြံမြေများရှိသည်။
စစ်တွေ အိမ်ခြံမြေ တွင် အိမ်ခြံမြေ အရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ခြံမြေ ပျမ်းမျှဈေးနှုန်းမျ
အိမ်ခြံမြေ အရွယ်အစား ပျမ်းမျှ ဈေးနှုန်း 1 အိပ်ခန်း (2 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 1,900 သိန်း2အိပ်ခန်းများ (6 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 4,180 သိန်း3အိပ်ခန်းများ (11 အိမ်ခြံမြေများကြည့်ပါ) 4,190 သိန်း
စစ်တွေ တွင် အိမ်နီးချင်းများ
Myebon 19 အိမ်ခြံမြေများ ရရှိနိုင်သော
ဇိမ်ခံပစ္စည်း အိမ်ခြံမြေ တွင် စစ်တွေ
တတ်နိုင်သေ အိမ်ခြံမြေ တွင် စစ်တွေ
အကာအကွယ် ဆက်သွယ်ပါ အသင်းအဖွဲ့ နှိပ်ပါ Careers တည်နေရာမြေပုံ Virtual Real Estate